संवाददाता : रारा सञ्चार प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०७४, मंगलवार ११:४९ प्रकाशित मिति : डिसेम्बर 12, 2017
दुख नलाग्ने भन्ने कुरै भएन । आफ्नो विजयमा भित्रैबाट खुशी हुनुपर्ने कुरा हो, तर, भित्रैबाट खुलेर हाँस्न र खुशी हुने अवस्था बन्न सकेन । तर, समानुपातिक तर्फको मत परिणाम नआउँदासम्म केही भन्न सकिँदैन । ’cause, कांग्रेसका मतदाता घटेका हुन् कि हैनन् ? यो हेर्न बाँकी छ । अहिले कांग्रेसका मतदाता घटेका भन्दा पनि एमाले र माओवादीको मत जोडिएको पो हो कि ?
हामीले निर्वाचनअगाडि के भनिरहेका थियौं भने एमालेका थुप्रै मतदाताहरुलाई हामी आफूतिर आकषिर्त गर्छौं । र, माओवादीका मतदातालाई हामीले आफूतिर ल्याउँछौं भनेका थियौं । यसमा हामी पूर्णरुपमा असफल भयौं । ’cause उनीहरुले हामीलाई मत हाल्नुपर्ने कारणै बनाउन सकेनौं ।
जुन निर्णय जनताले पटक्कै मन पराएनन्, त्यो प्रत्येकलाई थाहा भयो । अनि जुन विषयमा हामीले राम्रो काम गर्‍यौं, त्यसका ’boutमा हामीले बताउनै सकेनौं । जनताका वीचमा कांग्रेसको पहिचान के भयो त ? कांग्रेसका ’boutमा एमालेले बताइदिएको कुरामात्रै हाम्रो ‘आइडिन्टिटी’ भयो । एमालेले आफ्नो उज्यालो परिचय जनताको वीचमा लग्यो ।
पार्टीका आम सदस्यहरुचाहिँ अलि स्वतन्त्र ढंगले सोच्छन् । पार्टीको हितका ’boutमा बढी चिन्तित हुन्छन् । ’cause उनीहरुसँग केही पनि लेनदेन छैन । पार्टीका नेताहरु चाहिँ आफ्नो नाफा घाटाका ’boutमा सोच्छन् । मैले बोलेको कुरा सही हो भनेर बोलें भने शेरबहादुर देउवा रिसाउलान् कि ? रामचन्द्र पौडेल रिसाउँछन् कि ? यस्तो हिसाब-किताव हुन्छ त्यहाँ । कसले टिकट पायो, कसले पाएन, भोलि कसले पाउँछ, त्यहाँनेर हिसाब-किताव हुन्छ । यसले गर्दाखेरि चाहँदा चाहँदै यत्रो ठूलो पार्टीमा परिवर्तन अवरुद्ध हुन सक्छ ।
विस्तारै ममाथि एकपछि अर्को प्रहार हुँदै गए । केपी ओलीले आएर मेरा’boutमा टिप्पणी गरेर जानुभो । बद्री पंगेनीले मलाई फटाहा भनेर गीतै बनाउनुभयो । केपी ओलीजीले यो गाढी चढ्ने सेलिब्रेटी हो भन्नु भो । मविरुद्ध सबै प्रयोगहरु भए ।
त्यो पनि हैन । जस्तो- अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमै हामीले हेर्‍यौं भने एमालेले आफ्ना ’boutमा केही कुराहरु भन्यो । नेकपा एमाले यस्तो यस्तो पार्टी हो भन्यो । उसले कांग्रेसका ’boutमा पनि केही कुरा भन्दियो । चुनाब जित्यो भने कांग्रेसले देशै बेच्दिन्छ भन्यो । कांग्रेसका पालामा केही पनि काम भएन भन्यो । एमालेले आफ्नो परिचय पनि आफैं दियो । कांग्रेसको परिचय पनि उसैले दिइदियो ।
हामीले हामी को हौं भनेर आफ्नो ’boutमा पनि बताउन सकेनौं । एमालेका ’boutमा हाम्रो पनि धारणा थियो, त्यो धारणासमेत राख्न सकेनौं ।
हामी चुनाव कसरी लड्यौं भने एमालेले हाम्रा ’boutमा उसैले भन्दिएको कुरालाई लिएर चुनाव लड्यौं । यसमा केही फण्डाहरु पनि थिए, त्यसलाई हामीले चिर्नै सकेनौं ।
कांग्रेसमा बहसः देउवाको विकल्प को ? सिटौला, पौडेल कि अरु ?
२४ असार २०७४, शनिबार ०९:३५